सोमबार बस्ने संसद बैठकमा मुठभेडको ‘मुड’मा एमाले ! - Everest Dainik - News from Nepal
सोमबार बस्ने संसद बैठकमा मुठभेडको ‘मुड’मा एमाले !
काठमाडौं, पुस १७ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले जवर्जस्ती संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल गर्न खोजे प्रतिकार गर्नसक्ने संकेत गरेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल, काठमाडौं शाखाले आइतबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले सदनमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय एकता विरुद्ध रहेकोले विरोध गरिएको बताए । उनले भने, ‘अवान्छित ढंगले संशोधन विधेयकको कसरी टेबुल हुन्छ, एमालेले हेर्छ ।’
पोखरेलले एमालेको अबरोधकाबीच विधेयक अगाडि बढाउन सरकारलाई चुनौति दिए । संविधानको किटानी व्यवस्था कायम रहुञ्जेल संशोधन प्रस्ताव छलफल लैजान नदिने अाफ्नो र सत्ता विपक्षी दलको अडान रहेको दोहोर्याए । ‘यसलाई सामान्य संशोधनको रुपमा लिनु हुँदैन, यो संशोधन संविधान र राष्ट्रहितविपरीत छ, राष्ट्रहित विपरीत हुने कुरा संसदमा छलफल हुन दिइँदैन,’ उनले भने ।
याे पनि पढ्नुस इश्वर पोखरेलको दाबी-'भित्र भित्रै चुनावको तयारीमा मधेसी मोर्चा’
तर उनले सभामुखले खेलेको मध्यमार्गी भूमिकाको प्रशंसा गरे । ‘सभामुखले सबै दलहरुलाई सहमति गर्नुस भन्नुभएको छ, उहाँले दलहरुबीच छलफल गर्नुपनि भएको छ, दलहरुलाई सहमति वा प्रक्रियामा सहमति गर्नुस् भनेर भन्नुभएको छ, त्यसलाई सकारात्मक लिन्छौं,’ पोखरेलले भने ।
तर, एमाले लगायतका विपक्षीदलहरुसँग सहमति नगरी संसदमा प्रस्ताव टेबल भए एमालेले चुप नबस्ने उनले चुनौति दिए । उनले भने–‘प्रदेशको सीमा हेरफेर संविधान विरुद्ध आएकोले छलफल हुन दिदैनौं ।’
असंवैधानिक विषयलाई संसदमा एकपटक छलफल गर्न दिने हो भने फेरि पटक–पटक यस्तै कुरा आउने पोखरेलको बुझाइ छ । ‘संविधान जारी गर्न नदिनेहरु नै संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन्,’ निर्वाचनका लागि एमालेले सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न पनि तयार छौं, तर असंवैधानिक र बेमौसमी प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
उनले सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर चुनावमा गए सहमत हुने बताए । ‘हामी लचकताकासाथ भनिरहेकाछौं । संशोधन विधेयक स्थगन गरौं र चुनावमा जाउ । एमाले चुनावका लागि सत्तापक्ष सङ्ग वार्ता गर्न तयार छ ।’
उनले सरकारलाई चुनौति दिदै‌ं भने- काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेका हौं । २२ गतेको कार्यक्रमले धेरै कुराको फैसला गरिदिने छ ।